Category:Chalcogen - Wikipedia
Jaalkojiin (Chalcogen) sidoo kale loo yaqaano Guruubka Ogsajiinta ama Guruubka 17aad waa guruub curiye kimiko ee qeybta 17aad ee safafka Diwaanka Curiye. Guruubkan wuxuu ka kooban yahay lix curiye kuwaas oo kala ah: Ogsajiin (O), Salfar (S), Seleniyaam (Se), Teluriyaam (Te), Boloniyaam (Po) iyo Lifermoriyaam (Lv).
Qeybtaan waxaa ku jirto 5 oo ah qeybaha hoose waana 5 oo dhamaantood ah.
► Bir La Mood‎ (6 P)
► Bir la mood‎ (10 C, 115 P)
► Bir Ma Ahe‎ (10 C, 112 P)
► Chalcogen‎ (5 C, 48 P)
► Guruubyada Diwaanka Curiye‎ (6 C, 84 P)
Bogagga ku jira qeybta "Chalcogen"
waxaa meeshaan ku jirto 48 oo maqaalo ah waxeena ku jiraan qeybtaan, waana 48 oo dhamaantood ah.
Waxaa laga keenay "https://so.bywiki.com/w/index.php?title=Category:Chalcogen&oldid=153214"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 01:44, 9 Febraayo 2016.